Terror Free Somalia Foundation: Itoobiya iyo Kenya oo dadaal ugu jira sidii Xuduudka Badda Soomaaliya loogu soo koobi lahaa 12 mayl, iyo Dawladda Shiikh Xasan oo arrintaas u dhega nugul
xeerkii Badda Soomaaliya ee Law No. 37 oo dhigaya in xuduud baddeedka Soomaaliya yahay 200 mayl badeed oo ah TERRITORIAL WATERS.
Soomaaliya waxay ka mid tahay dalka xuduudda badoodu tahay 200 mayl badeed oo Terrirorial waters ah, arrintaas Soomaaliay keli kuma ah. Tan kale muranka Badda ee Kenya iyo Soomaaliyana taariikhda kuma jirin wixii ka horeeyey dawladdii Shariifka. Arrinta muranka ah waa dhulka NFD ee ka mqan Soomaalida. Haddaba Riiraash sidaas in uu madaxda jamaahirada ah ka dhaadhicin lahaa ayaa wanaagsanaan lahayd...more